ईदको बेला कश्मीरमा फेरि कडिकडाउ – Page 2019 – दाङ खबर
ईदको बेला कश्मीरमा फेरि कडिकडाउ
काठमान्डौं साउन २७ । सोमवारको ईद-उल-अज्हा पर्वको अगाडि भारतीय अधिकारीहरूले कश्मीरमा पुन:सुरक्षा कडिकडाउ गरेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरको मुख्य शहर श्रीनगर पुन: पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ। गत दुई दिन यता खुकुलो पारिएको कर्फ्यु अज्ञात कारणले फेरि कडिकडाउ पारिएको छ। आइतवार बेलुकी सडकमा कुनै मानिस वा सवारीसाधन देखिएनन्। आइतवार करिब १२ बजेसम्म सडकमा निकै आवतजावत रहेको र कतिपय स्थानमा त ट्राफिक जाम पनि भएको बिबिसीले बताएको छ ।
त्यहाँ अहिले पनि सूचना प्राप्त गर्ने साधन प्राय: बन्द छन्। कसैसँग पनि के भइरहेको छ भनेर कुनै जानकारी छैन। शुक्रवार श्रीनगरको सौरा क्षेत्रमा नमाज प्रार्थनापश्चात् विरोध प्रदर्शन भयो। तर भारत सरकारले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको र कतैपनि ठूलो विरोध प्रदर्शन नभएको बताएको छ।
जम्मू-कश्मीर प्रहरीले ट्वीट गरेर प्रहरीका तर्फबाट एउटा पनि गोली नचलाइएको बताएको छ। प्रहरी प्रमुखले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले कश्मीरमा गोलीबारी भएको समाचार प्रसारण गरेको भएपनि त्यो पूरै गलत भएको जनाएका छन्।
ईद कसरी मनाउने ?
यस्तो वातावरणमा अब त्यहाँ ईद कसरी मनाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बीबीसीका अनुसार अघिपछि ईदको नमाज त्यहाँको जामा मस्जिदमा पढिन्थ्यो। त्यसका अतिरिक्त ईदगाह वा ठूला मैदानमा पनि नमाज पढिन्थ्यो।
बिबिसीले भनेको छ, ‘अनन्तनाग, शोपियाँ, बाँदिपुरा, कुपवाडाजस्ता ठाउँमा ठूल्ठूला मैदानमा नमाज पढिन्थ्यो। तर यसपालि सायद घरघरमै वा बस्तीभित्रै नमाज पढ्ने अनुमति दिइन्छ।’
Prevबकर इद पर्व मनाइँदै
Nextबकर इदले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ तुल्याओस्ः राष्ट्रपति
तेब्बर भाडा असुली:सम्बन्धित निकाय मौन
गाउँपालिकाका अध्यक्षमाथि आक्रमण, चार जना प्रहरी नियन्त्रणमा
किम्बु खेती गर्ने किसान घटे
शिक्षक ‘लाइसेन्स’मा गलत फारम भर्नुभयो? सच्चाउन मिल्छ